5 Fanontaniana for Beyoncé — Trip LEE - OFISIALY SITE
5 Fanontaniana for Beyoncé
Music no ampahany lehibe amin'ny fiainako izany foana aho mieritreritra hoe ahoana no hampiasa azy io tsara indrindra. Sarotra ho ahy ny mankafy zavakanto tsy fandinihana, nandray an-tsoratra, ary fametrahana fanontaniana. Beyoncé manana ny tsara ny firenentsika amin'izao fotoana izao, ary izy no mazava ho azy fa iray amin'ireo malala indrindra Pop kintana. Ny voalohany ramatoa mihitsy aza nanao hoe: raha mety ho olon-kafa, izy Te te ho Beyoncé.
Beyoncé dia malaza kokoa noho ny hatramin'izay izy, ka tsy afaka miala ao amin'ny TV, na mahazo an-tserasera tsy nahita zavatra momba ny, avy amin'ny famerenana azy ny sary rakikira vaovao azy mandeha eny amin'ny arabe sy ny vavy. Mahafinaritra ahy noho ny talenta sy ny aingam-panahy ny fiara, fa gaga koa aho ny zavatra hitako.
Beyoncé ary hataoko manan-teny kely iombonana. Izahay roa avy any Texas, ary betsaka ny fianakaviana tao Houston. Izahay mpanakanto roa izay efa nisaorana manodidina ny isan'ny irery ihany Albums (na dia kely fotsiny fantatra bebe kokoa noho ny fitiavany Ahy). ary Farany, izahay samy mpanota mila ny fahasoavan'Andriamanitra.
Dia ao an-tsaina, raha nanana fahafahana mba hitsena azy ireo ny sasany amin'ireo fanontaniana mety manontany aho, ny sasany izay mbola miasa aho ny alalan 'ny tenako.
1. Manao ahoana ny herin'i araka ny hevitrao ny mozika ao amin'ny fiainan'ny sy ny soatoavina ny tanora?
2. Music dia tsara endrika ny tena teny, izay manana fahafahana mba hanidina ny fihetseham-pontsika, eritreritra, sy ny firehetam-po. Fa ho an'ny olona an-tapitrisany ny mozika ihany koa ny manompo toy ny feonkira ny fiainany, ary mamolavola ny fomba fijery izao tontolo izao. Ahoana no hampifandanjana ny tena fanehoan-kevitra sy ny andraikitra anananao ho influencer?
3. Ve ny hevitrao ny sain'ny anao hanatona ny ny hatsarana sy ny firaisana ara-nofo (izay matetika mampiriorio avy amin'ny zavakanto) mifanohitra ny hafatra amin'ny hira toy ny, "Pretty mankarary fo?” Amin'izany hira, ianao toa mampahery zatovovavy tsy hamono tena mitady tonga lafatra, ary hifantoka amin'ny ny fanahiny fa tsy ny tsiky. Fa araka ny hevitrao ny lalandava isam-ponina ny fari-beauty- izay mazava fivoriana asa manohitra izany hafatra?
4. Misy fomba mba hankalaza manambady firaisana ara-nofo tsy ampahibemaso ny mampideradera ny fananany ny olona iray firaisana ara-nofo, ary naka fanahy ny hafa hila?
5. Nahoana no Jay-Z ny forties, fa mbola mangatsiaka kokoa noho ny ahy?
Ireo dia vitsivitsy monja amin'ireo fanontaniana izay tonga ao an-tsaina omaly alina. Ve ianareo ry zalahy misy eritreritra?
Arana Rafael • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:12 aho • navalin'i
Chris • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:13 aho • navalin'i
Misaotra Rahalahy noho ny tompon'andraikitra ampy tsy vonoina ho fanafihana. Lahatsoratra be dia be aho nahita avy ny Kristianina no tena tezitra sy diso lalana.
TransformNotConform • Janoary 29, 2014 amin'ny 9:29 PM • navalin'i
Izany no mahafinaritra ny mahita. Kristianina izay tsy miraharaha ny olana fotsiny, na fotsiny ny olona rehetra hiala fanafihana mivazavaza “NY mandeha any amin'ny helo.” Mampahatezitra azy ireo fotsiny mba handray tsara Jereo ny zavatra Manaiky sy ny fomba asa. #CauseSomethingSureAintAddingUp Misaotra Trip
Broc • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:14 aho • navalin'i
Dia hanontany aho azy ny momba azy sy ny vadiny ny anjara tamin'ny Illuminati. saingy #5 dia ahy nanakodia Haha
Julia • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:15 aho • navalin'i
Tiako ny fomba ny fanontaniana napetrak'i. Tena nanan-kery izy rehetra tsy ankizivavy tanora ary tena manan-talenta izy. Manaiky aho fa, indraindray ny talenta dia nanaloka ny ny dihy na ny tsy fisian'ny akanjo.
Andrew HaHa Ross • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:17 aho • navalin'i
Tiako ny fomba voarafitra ny zavatra rehetra nolazainareo amim-pitiavana, fa mahasoa fomba. Beyonce & voly hafa ao amin'ny toerana tanteraka ho modely ho an'ny tanora, fa ny maro an'isa tsy mahatratra izay tsara indrindra vitany. Tsy maintsy mivavaka ho azy ireo foana. Fanantenana Tsara ihany ny olona. Ataovy hatrany ny zavatra ho an'ny Fanjakana!
JasmineArogundade • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:19 aho • navalin'i
Mihevitra aho fa izany no manaporofo tsara ny andian-teny ireo fanontaniana. Ny dikan-izy Mety ho somary manafintohina paharainan'ny LOL. Misaotra anao noho ny ohatra & koa miasa isan 'andro mba hanokatra firenena’ ao an-tsaina an'i Kristy / faharesen-dahatra
Debbi • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:22 aho • navalin'i
Misaotra noho izany.
Fahina • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:25 aho • navalin'i
TPT @ #5. fa raha tsy izany, legit fanontaniana ho an'ny olona rehetra sy ny olona efa ho in na naniry ny indostrian'ny mozika.
JonReagan • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:25 aho • navalin'i
Nihevitra aho fa izay no tsara sy mety nihevitra nampahatezitra fa mahatsiaro fa ny herin 'Andriamanitra ho famonjena. Tiako ny Filazantsara madio izay hatolotra ho azy ary aoka ny Fanahy Masina, mampiseho azy ny fahadisoan'ny ny fanaony toy ny efa ho antsika rehetra. Raha tsy izany, Tsy fantatro hoe nahoana izy no hikarakara ny hiova. Fa momba izay ihany, -dalana ianao mangatsiaka kokoa noho ny JayZ. Way Cooler!
Olivia • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:56 aho • navalin'i
I faharoa izay- fomba mangatsiaka kokoa! :-)
Tenyll • Janoary 29, 2014 amin'ny 1:00 PM • navalin'i
Leila. Bailey • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:27 aho • navalin'i
Ireo no fanontaniana lehibe rehetra!!!!!!
#5 anefa.. tpt
JesiliaRose • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:29 aho • navalin'i
Ireo no fanontaniana tsara Trip Lee. Mihevitra fa ny fotoana intsony manamarina ny mozika, indrindra ny Kristianina, izay mihaino ny zavatra. Izany no lehibe!
P.S. Hoy ny fofombadiny “Nah, mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ianao noho Jay-Z.” :) Andriamanitra anie hitahy anao Bro.
Michelle • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:29 aho • navalin'i
Efa ela aho no tia Beyoncé. Izy no tsara tarehy sy manan-talenta. Lalina koa aho ho any ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Na dia tia vehivavy ity, Tsy mihaino ny mozika intsony satria manana ny tena mitovy karazana fihetseham-po ny fanontaniana dia maneho. Manantena aho fa mahazo ny fahafahana manontany azy ireo satria ho tia ny hihaino ny valiny ary jereo ny fomba fiainany izy Dinihiny ny. Tsy manana fitsarana; Manontany tena fotsiny aho ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany. Misaotra noho izany.
Frank Gil • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:31 aho • navalin'i
Io fanontaniana farany aza.
Great lisitra. Aho ho tia ny hihaino ny valiny #3. Awesome Trip!
Justin • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:34 aho • navalin'i
Tiako ireo fanontaniana ireo. Manao ny asa mahatahotra articulating fanontaniana lehibe fa maro amintsika no ho azy ao amin'ny nieritreritra tsara avy, ary ny fikarakarana fomba. Ianao aingam-panahy ho ahy sy ny maro hafa. Enga anie ny bilaogy mikasika olona iray (Fantatro fa ho). Iza no mahalala, Angamba hanompo Beyonce!
Zaeria • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:36 aho • navalin'i
Tiako ho fantatra, inona na raha misy fetra efa napetraka manokana noho ny hery miasa mangina eo amin'ny andraikitra ny amin'izao fotoana izao ny taranaka. Raha izany, Inona no Hataonao Manoloana izany? Raha tsy, Nahoana? (izay karazana fanontaniana piggy damosina amin ' #2)
SusanBonnerDunston • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:40 aho • navalin'i
Marina izay nolazainao Trip! Fantatro ianao dia tena tovolahy 'Andriamanitra aho, rehefa nandre voalohany anareo tany North Carolina
Olivia • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:43 aho • navalin'i
Misaotra anao noho ny hafatra. Vao haingana aho no nahita ny lahatsary izay manazava betsaka momba ny, amin'ny “azy” Nilaza ny ny fananany (Sasha Masiaka) sy ny fomba mandihy izy an-tsehatra. Nanomboka nijery ny Grammy ny amin'ny zanako, ary rehefa nanomboka nandihy ny nangataka ahy mba hanova ny fiantsonana. Rehefa nandefa ity Info amin'ny toerana iray hafa fotsiny isika milaza Mila mitandrina ny zavatra ny ankizy hijery sy hoe iza izy mahafinaritra, I ruffled be dia be ny volony. I tratry ny ananany izany maratra amin'ny fomba an-kolaka ny fahavalo mampiasa olona, toerana sy ny zavatra avy mandra indraindray eny masiaka. Tsy te-mianatra aho ary mbola. Izany dia mametraka tsara ny rahalahy.
Timothy Brown • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:43 aho • navalin'i
Efa nilaza fa Kristianina ianao Imbetsaka, moa ve ianao mihevitra fa ny mozika no mamokatra dia maneho ny Kristy ao anatinareo.
Rhionah • Janoary 31, 2014 amin'ny 5:08 aho • navalin'i
Aho mba toy izany ianareo eo amin'ny iray ity ankizivavy.
Tiheasha • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:43 aho • navalin'i
Amen, Misaotra anao noho izany! Hatao aho enjehina noho manokana “family” izay midika hoe rahavavy sy rahalahy ao amin'i Kristy… fa maka sary mitovy fanontaniana sy olana eo amin'ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny Beyoncé. Na izany aza mivavaka fotsiny aho fa Andriamanitra dia omem-boninahitra na inona na inona.
Cindy • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:48 aho • navalin'i
Marina izay nolazainao na nanontany, mbola tsara kokoa.
Ruthie • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:49 aho • navalin'i
Tiavo ny fanontaniana sarotra. Hitako ianareo sy Jay-Z, ary miangavy ny maha samy hafa ny. Tohizo ny ho ohatra. Aza miherika! Mitandrema hatrany Up! Aoka ny fiainanao Derao Andriamanitra! Ianao sy ny Cross Hetsika fanampiana mitaiza ny ankizy. I Ho feno fankasitrahana lalandava.
Allen • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:49 aho • navalin'i
Mino aho fa ireo fanontaniana ireo dia namaly ny Beyoncé ny tenany indray andro. Tiako ny fomba dia napetrak'i sy ny halalin'ny mahazo ny fon'ny ny antony manosika ao “Nahoana”
Alexis • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:52 aho • navalin'i
Beyonce mety na dia mety tsy ho tonga manerana ity lahatsoratra ity, ireo fanontaniana ireo, na ianao ao amin'ny androm-piainany. I tena miahiahy izy Te hamaly ireo fanontaniana ireo, na miraharaha ny. Ny zava-misy fa ny fanontaniana tokony nanontany Mety ho nidika ny mifanohitra sasany fa mety na tsy te niresaka.
Mety azo heverina fotsiny avo kanto, fa Mihevitra aho fa dia tonga noho ny andraikitra lehibe. Ny olona iray ny ny laza efa nanao ny asany teo ireo fifanoheran-kevitra, ary mbola ao amin'izany izay manosika azy. Mino aho fa misy fanantenana ao amin'ny fanontaniana, fa mety hanapa-kevitra ny mieritreritra ny momba azy ireo. Antenaina izy ho N Ho toerana amin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainany mba handinika azy ireo. Faly aho hoy izy ireo.
Nicky • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:55 aho • navalin'i
Tiako ny fanontaniana. Tsy mampahatahotra izy ireo ary nieritreritra mihantsy. Fantatro fa ny maha-mpanakanto sarotra sady manana ny fiainany ivelan'ny ifantohan'ny sain'ireo zatovolahy. Manontany tena aho no ho hitan'izy ireo fa noho ny toerana foana izy ireo ao amin'ny sain'ny. Maro ny mpanakanto manamarina ny asany amin'ny filazana fa “fialam-boly fotsiny.” Aho te-hahafantatra avy taminy aiza no ny “dia fialam-boly fotsiny” tapitra? koa, fa amin'ny maha-modely no mahatsapa izy fa izy no tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana fa ny mozika no(Nanaiky izy fa toerana mavitrika amin'ny alalan'ny fitsidihana sekoly sy ny miresaka amin'ny ankizy)?
OfficiallySmilez • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:07 PM • navalin'i
Ireo fanontaniana ireo ny isan'ny mpino alot hevitra; ny mpino izay mbola tsy sahy hiteny ny ny questionables ny olona ao amin'ny miraharaha. Heveriko fa matetika loatra, haingana isika mba hisarika ny saina ho amin'ny ratsy hafa mpanakanto na ny olona amin'ny ankapobeny, izay fantatsika fa tsy mivoaka ho tahaka ny manameloka fa mitsaratsara… Fa izay isika???. Fa ireo fanontaniana ireo no fotsiny ny mifanohitra. Raha Beyonce dia ny hamaly ireo fanontaniana ireo, izy, ny tenany, Mino aho fa tsy misy isalasalana, nanomboka nahita izay efa ampandehanana nahita; fotsiny ny mamaly ny fanontaniana.
Awesome sy mampihomehy (ny fanontaniana momba ny J.Z) :)
Kym • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:15 PM • navalin'i
tsy manaiky aho. Mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ianao noho Jay Z …mampianatra sy aingam-panahy ny zatovo izay mihaino ny mozika mba ho tsara kokoa…velona tsara kokoa…tia an'i Jesosy….tia ny fianakaviany, ary hitombo ho lehilahy fitsipika…THATS ankehitriny mangatsiatsiaka. Beyonce no tsara tarehy ary manana talenta anefa ny hira izay mandeha….”Mety ho tanora aho, fa im vonona”….Mampirisika ny tanora mba hanome ny ankizivavy ho fitsiriritana sy ny firaisana ivelan'ny fanambadiana, na… ny 13 zanakavavin'ny anabaviko no nihira it..smh. Nahoana no mamporisika ny fahotana?
Chim Chalera • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:17 PM • navalin'i
Wow izao no mahatahotra Manantena aho fa hahazo izany fahafahana diany mpanakanto mila mpanakanto toa anao hamolavola ny toro-lalana na ataoko raha ireo fanontaniana dia tena nanontany izy fa ho sambatra raha tsy izany dia agood nihevitra rehetra ireo fanontaniana ireo fa mety ny rehetra, mpanakanto avy any mitovy amin'ny Beyoncé.
Michael III • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:19 PM • navalin'i
Tiako diany ity. #5 efa ahy nanakodia. Fa izy ireto no hevitra lehibe fanontaniana mampisaintsaina. Ary ny mpanakanto tsy ara-pivavahana sy ara-Baiboly na mila manontany themseleves isaky ny nataony izy ireo voakasiky ny vita amin'ny lalana.
Angamba hahita izany izy, ary hamaly azy ireo ho anao :)
Johnnie K • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:28 PM • navalin'i
Trip – Awesome fanontaniana, ary tanteraka voarafitra, Rahalahy! I saika maintsy hitsangana ka handao ny efitrano fandraisam-bahiny toy ny Natalie nataon'i Grant tao amin'ny fampisehoana. Aho nijery ny fampisehoana ihany satria ny 13 taona zanany te, ary te hahita ny zava-mitranga ny tsy ara-pivavahana izao tontolo izao ny mozika, araka izay nanaraka azy avy amin'ny ankapobeny 10 taona maro lasa izay. Nisy 2 fampisehoana dia nilaza, “Oh, izany ny Jak!” – Robin Thicke ary avy eo dia Pharrell. Tsy maintsy nanontany ny zanako raha ny tenany nahalala izay ireo hira ireo na dia tokony ho, hoy izy fantany fa tsy lazao amiko (firaisana ara-nofo sy ny vehivavy objectifying.) Noho izany misy lafiny Atsimbadiho ny vavy hira. Beyonce sy ny sasany amin'ny vehivavy mpanakanto’ hira mitarika ho amin'ny vehivavy maneho ny firaisana ara-nofo ary avy eo dia objectified. Tena mahatsiravina tsingerin'ny ny ota izay mitarika ho amin'ny maro ankizy amin'ny ray aman-dreny izay tsy miraharaha samy izy, satria ny fifandraisan'izy iray mifototra amin'ny filàna… Na izany na tsy, I efa nitory ampy, asa tsara, Tiava ny mozika! – J
Alexis • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:32 PM • navalin'i
andraso anefa… Ahoana bout rangotra, ratra kely fotsiny ianao #5 avy amin'ity lisitra! TPT
Michael • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:36 PM • navalin'i
Te-hanontany azy hoe nahoana izy nanapa-kevitra ny ho tonga mpihira manao tontolo izao mozika. Fantatro izy nanana fototra kristianina, nefa tsy mahatonga ahy hahatsapa kokoa. izy, toy ireo maro hafa, ao amin'ny toerana mba ho anjara-ohatra lehibe Fa nifidy ny ho be mpitia fotsiny fa tsy. Halako ny faneva dia nametraka ankehitriny Amerikana, indrindra fa ny tanora.
Tamin'ny maivana ny naoty, Tiava ny mozika. Mila manao hira iray hafa amin'i Jimmy Nedum…..na na inona na inona ny anarany no. Tpt! Tsara fanontaniana Tho.
Nicole • Janoary 29, 2014 amin'ny 12:47 PM • navalin'i
Noho izany dia tsy maintsy milaza fotsiny aho namaky izany aho Trip Lee feo tsara indrindra….na izany na tsy, ireo ny sasany mahatahotra fanontaniana! Tiako ny mahita izany tafa sy dinika!!
hotahian'andriamanitra anie ianao!!
Juanb • Janoary 29, 2014 amin'ny 1:26 PM • navalin'i
Trip Lee! Fantatro fa mety hahazo ny olona iray taonina hollering amin'ny ya fa te-hilaza fotsiny ny fiainanao sy ny mozika efa lehibe nampahery sy fitahiana ho ny mandeha amin'i Jesosy. Amin'ny fifanakalozan-kevitra, Tena nahafinaritra ahy ny fanontaniana. #4 niraikitra avy amiko. (ary ireo no fotsiny ny hevitra Fantatro aho feo kely) Mino aho fa misy ny lalana mba hankalaza ny manambady fiainana. Ary ho toy ny mpanara-dia an'i Jesosy, ny zavatra mampanahy ahy ho mpino fa tsy mampideradera ny ara-pananahana. Sarotra ho ahy ny mahita ny am-po 'i Jesoa’ ao anatin'ny iray ny mozika / fiainana rehefa ny ankamaroan'ny fotoana mahita azy ireo mampideradera ny fananany ny ara-pananahana. Tsy misy fitiavana amin'izany. Fotsiny fahafahana ho fakam-panahy. Ny iray dia tokony hihevitra ny fomba manome voninahitra ny Tompo sy ny mpiara-rahalahiny sy sisters.But avy eo indray, fa ny karazana fitiavana amin'ny alalan'ny fiheverana dia avy amin'ny fomba fijery kristiana.
Joanna • Janoary 29, 2014 amin'ny 1:37 PM • navalin'i
Yess, I tia fanontaniana #3!!! Ny mihitsy no foana aho manontany tena koa!
Keisha • Janoary 29, 2014 amin'ny 1:45 PM • navalin'i
marina izay nolazainao….manana aho 1 lahy sy ny 3 ankizivavy ary izaho soo faly fa Izaho no nanaitra azy ireo mba hijery mpanakanto avy ny vokatry ny asany. Raha izay mamorona tsy afaka nilahatra ny tenin 'Andriamanitra. Tianao fa mamahana ny fanahy? Mino aho fa ianao LALANA mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any NOHO Jay-Z.
Nikki • Janoary 29, 2014 amin'ny 2:08 PM • navalin'i
LALANA mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ianao noho Jay-Z! Mahaliana fa namoaka ity amin'izao fotoana izao. Aho nahita ny lahatsary B, “Zavatra tsara indrindra aho, na oviana na oviana Had,” omaly alina tao amin'ny YouTube rehefa mandalo ny hira sasany 80. (??!!) Nanomboka nivoaka taminy fotsy Lingerie, raha afaka miantso azy io mihitsy aza fa. Maratra ny foko araka izay nijery azy! Tena tena maharary ny mahita azy & maro tsara tarehy hafa & mahagaga mpanakanto mivarotra ny tenany amin'ny firaisana ara-nofo & mampideradera ny fananahana. Na izany aza, Tsy maintsy manontany, Aiza ireo lehilahy eo amin'ny fiainan'izy ireo? Aiza ireo razany & lehilahy? Tsy tokony B ny Ray sy Jay-Z ho “ady” azy amin'ny rehetra fa zava-? Tsy ireny va no tokony ho fiarovana azy & manome voninahitra azy amin'ny zava-drehetra ao aminy? Ho tonga toa ny voalohany milaza fa ny vehivavy mila tia mampideradera ny fananany intsony ny tenany, fa Izaho kosa fanamby ny olona mba handray ny lovia & manomboka manome voninahitra ny vehivavy. Andao mamorona fiaraha-monina izay ny vehivavy no ankalazaina & voninahitra noho ny tena hatsaran-tarehy & izay misy olona hajaina. Miala eo aho ny savony boaty izao. :)
Pamela • Janoary 29, 2014 amin'ny 2:18 PM • navalin'i
marina izay nolazainao…Tsy maintsy nanontany ny tenako ireo fanontaniana ary mampihatra rehetra aminay, raha Hianao no misy mozika na tsia, velona ny fiainanao fotsiny misy olona mijery foana sy ny olona ihany koa ny hoe: Te-ho tahaka izany aho rehefa lehibe. Ka ho azo antoka raha tena miantso ny tenanao Kristy toy ny, manao zavatra izay maneho an'i Kristy, thats antony Mino aho fa ny sasany tanora maro no sahiran-tsaina, izay no manaraka. Manantena aho fa ny i Jesoa Kristy ary Izy irery ihany, raha tsy izany dia hanohy hitarika azy ireo any an-davaka. Isika rehetra tompon'andraikitra amin'ny ataontsika, satria fihetsika miteny mafy noho ny teny. Ny ankamaroan'ny mpanao mozika izay nanomboka tany am-piangonana any amin'izao tontolo izao, satria tsy manohana ny Kristianina mozika. – Ho tia ny mihaino ny valin-fa ny zava-dehibe kokoa dia ho tia ny azy hiverina amin'i Jesosy.
Virgil • Janoary 29, 2014 amin'ny 2:20 PM • navalin'i
Jay -Z na aiza na aiza dia tsy avy eo akaiky mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any Trip Lee!
Chelbia • Janoary 29, 2014 amin'ny 2:46 PM • navalin'i
Ny fanantenana indray andro any izy dia hampiasa ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy eo amin'ny toerana voalohany….dia ny hidera sy hanome voninahitra Azy ihany. Izy no ara- ny hanompo an'Andriamanitra sy azo ampiasaina Noho Ilay Fanjakany. Ny devoly nangalatra azy. Enga anie Andriamanitra anie gracefull azy.
Andriamanitra telo izay iray • Janoary 29, 2014 amin'ny 2:47 PM • navalin'i
Voalohany indrindra tiako ny feonao Trip!!! Yeah ny feonao ianao LOL ary Haha! Momba ny fanontaniana I love fanontaniana 4 ary 5 dia mahatsikaiky, Trip ianao tsy mangatsiaka kokoa.. Mino aho fa efa nangataka tamin'ny be fitiavana sy fahasoavana sy fahendrena.. Niasa tsara.. Ary enga anie i Jesosy hanampy tsy Beyoncé fa na iza isika no mpino.. Tsy mihaino ny mozika Tho intsony..
Tony • Janoary 29, 2014 amin'ny 3:54 PM • navalin'i
Zavatra voalohany izay nandroaka azy? Ny olona iray dia handeha na manolotra ny tenany ho marina na ny tsy fahamarinana. Tsy misy ilaina ny siramamy akanjo na inona na inona. Misy lalana izay toa ho mahitsy ny olona, ​​fa ny farany dia fahafatesana. Eny mpanota isika, ary mila Mpamonjy, Fa mandra-pahoviana isika rano foana teo hafatra?? Moa ve tsy mitovy amin'ny ny fiangonana tany Korinto, izay Paul nahitsy? Ny fahamarinana dia mila holazaina.
Meredith • Janoary 29, 2014 amin'ny 4:19 PM • navalin'i
Ny fanontaniana ireo aho mamerina te hanontany azy koa. Aho tia hihaino ny valin ireo fanontaniana ahiahinao amim-panajana. Tiako koa ny manampy “Ahoana no taratry ny mazava tononkira soatoavina anao manokana?” ary “Ny ankamaroan'ny hira vaovao hanandratra ny firaisana ara-nofo, ny vatana sy ny ara-pananahana. Efa nandinika an'i nanoratra ny hira izay midera ilay Andriamanitra nitso-drano anareo amin'ny fanomezana hihira sy voly?” ary YES!..Tena mangatsiaka kokoa ianao, ny tsara kokoa lyricist, ary ny tena ohatra ny “The Good Life”! Tena tia ny mozika!
Kruseaphix • Janoary 29, 2014 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
Yo Trip! Tsara izany / nanontany ary mihevitra aho fa tonga lafatra ny fotoana cuz ny olana ny artistes fiantraikany amin'ny fiainan'ny tanora sy ny tanora mbola tsy olon-dehibe kokoa mila fanontaniana. andro indray, Ary nahare fanehoan-kevitra avy amin'ny Slim jiolahimboto izay nilaza “na ankizy, izay miasa ny zavatra hoy izy ny hira dia tsy natsangana araka ny tokony ho” ary izaho dia tahaka ny whaaa?! Nilaza izy fa fotsiny ny mpanakanto ary ny hatreo amin'ny ankizy ny zavatra nianarany, ary aho toy ny, “ny mpampianatra ihany koa dia afaka milaza,ny asako ny mampianatra fa ny mpianatra no tompon'andraikitra amin'ny zavatra nianarany?.” Ny adala fotsiny fam. Tia isaky ny fanontaniana tahaka izao izaho manana toerana ho an'ny Bey malefaka sy maniry hahita azy voavonjy koa. Dia ho niresaka izany eo an-tanako lahatsoratra manaraka mba y'all afaka jereo izany amin'ny kruseaphix.wordpress.com
John Mansaray • Janoary 29, 2014 amin'ny 4:36 PM • navalin'i
Izany no tsara mamingavinga; nanazava taminay koa ny mpanara-dia be tsy mahazatra. matetika, mpitarika mora foana ny fanevan 'ny avonavona sy ny fahamboniana eo ny mpanara-dia. Fa ity lahatsoratra ity toa lalina fa mampirisika antsika fa ny finoana kristianina dia ny momba ny fikirizana. Naniry aho ho afaka ho afaka hametraka ny tena fihetseham-po mikasika ity lahatsoratra ity amin'ny teny, fa izao’ ho akaiky tahaka ahy dia mahay mahazo. Misaotra anao.
Gteqnix • Janoary 29, 2014 amin'ny 4:40 PM • navalin'i
Yo diany, fanontaniana tsara. Tena Don hoe nothin raha Valiny na tsia ny hevitra dia U nanao Ora teboka. Iza no no mpankafy ny ny azy no tokony hikarakara ampy ny milaza izany ho azy…anit trippin Bůh diany, Ure loatra HOT ho mangatsiaka Jay aint amin'ny fanekena Ora…
Vicky • Janoary 29, 2014 amin'ny 5:40 PM • navalin'i
“Tompo, no hanao resaka eo Trip sy B ny zava-misy?”
Gary • Janoary 29, 2014 amin'ny 6:05 PM • navalin'i
Tiako izy izany.. sy ny maro 5 TPT
JOECLER • Janoary 29, 2014 amin'ny 7:34 PM • navalin'i
lalina sy fanontaniana tsara lavitra.
Allison • Janoary 29, 2014 amin'ny 7:34 PM • navalin'i
Mieritreritra aho fa ny fanontaniana dia manan-kery aho matetika manontany tena hoe izao fa izy dia reny fa hisy ny sasany tsy negotiables. Manana ny zanakavavy izay mijery azy ary koa ny anay raha aoka izy ireo. Hitako ny sasany izay ao amin'ny aterineto fa hoy izy tonga malaza handeha hiangona .i tena mankasitraka 1.1.Six ka Miezaha Hahazo Andraikitra Records satria isika hanana na inona na inona hihaino to.God Misaora y'all
John • Janoary 29, 2014 amin'ny 8:34 PM • navalin'i
Mila izy Jesosy. Fa ho azy ny manao fa tsy maintsy hanolotra ny fiainany ho azy. Tena miahiahy izy dia ho vonona ny hiala ny ny voninahitro ho azy. Fa raha izy no Wow izay fiantraikany afaka hanana ny fanjakana.
Aho mivavaha iany izy no. Isika rehetra dia tokony.
Natalie • Febroary 1, 2014 amin'ny 5:13 PM • navalin'i
Jennb • Janoary 29, 2014 amin'ny 8:51 PM • navalin'i
Ny heviny manokana ny famaritana ny teny “mangatsiatsiaka” Tsy manondro an'i Jay Z…. #SorryNotSorry
Ms Gee • Janoary 29, 2014 amin'ny 9:00 PM • navalin'i
Trip Lee, Nihevitra aho na dia ny fanontaniana ireo havana amin'ny fanazavana ny zavakanto amin'ny teny mozika, fa angamba somary mafy aho. taratasy misy hevitra fanontaniana, Raha ny hevitro dia tsy handroaka ny asa an-trano izay dia mahatonga ny maha Kristianina (Mino aho fa, fara fahakeliny, io koa ilay asa mifototra amin'ny ny Affiliations amin'ny St. John UMC).
More manokana…Inona no manam-pahefana araka ny hevitrao ny mozika ao amin'ny fiainan'ny tanora sy ny soatoavina ny ankizivavy sy vehivavy?
JSok • Janoary 29, 2014 amin'ny 9:15 PM • navalin'i
Teny soa Trip. Mankasitraka aho maro tamin'ny fanehoan-kevitra. Mampahery ny mahita hieritreritra ny Kristianina matotra, ary mifandray amin'ny inona ny kolontsaina malaza no manolotra azy ireo. Tiavo ny tranonkala Bro, mivavaka amin'Andriamanitra mba hanohy hitahy ny fanompoanao.
tsy manana ahiahy, Cole • Janoary 29, 2014 amin'ny 9:59 PM • navalin'i
miteny aho, rehefa izay dia izay. Ianao dia manan-jo ny heviny manokana. Toa anao nanao hoe:,”ianao na dia mpanota sy mila ny fahasoavan'Andriamanitra”. Ny fahasamihafana dia, fantatrao ny Teny milaza sy Beyonce no tsy. Mivavaha ho ny very hibebaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony. Tripp, hatrany ny asa tsara sy hankatò an'i Jesosy Kristy
ABROWN • Janoary 29, 2014 amin'ny 10:23 PM • navalin'i
tsara fanontaniana! Rehefa nijery ny fampisehoana Grammy vao haingana, Diso fanantenana aho, ary nalahelo. Rehefa nieritreritra momba izany, Nanomboka hiantra azy, satria tsy tonga saina izy rakotry ny vadiny. Real ny fitiavana manarona, tsy ny vadinao dia aoka ny fitanjahanao ho hita amin'izao tontolo izao.
AOTRA • Janoary 29, 2014 amin'ny 10:51 PM • navalin'i
Tiako ny fomba io nosoratana. Tsara fanontaniana atao amin'ny fitiavana, vita tsara ny rahalahy ! #Mampahery
Chepe • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:52 PM • navalin'i
Ny fanontaniana dia mahatalanjona Manantena aho fa reny ny momba izany. Kaja izy ireo ary manao ny marina ny olona maro ny fanontaniana izay hanonitra ny kanto manana.
ny hanidina • Janoary 30, 2014 amin'ny 12:21 aho • navalin'i
Tsara sa tsy izany ny olona humblest aho namaky ny tantaran'i momba Bey volana ny ela. Misaotra anao fametrahana izany ohatra lehibe.
Chelbia • Janoary 30, 2014 amin'ny 5:34 aho • navalin'i
Nahazatra ahy ny nihaino azy izy, bcz tiako ny feony tokoa! fa ankehitriny ny hira rehetra nivoaka ny trano izy dia mampahery bcz fitondran-tena ara-nofo, fanodinkodinana, sy ny fitondran-tena nikomy. Misy fanahy ratsy miasa tavy fisotroana azy influance tovovavy tena hatrany am-boalohany. Ny mampalahelo dia mila miaro ny zanako vavy avy 5 taona avy amin'ny tena mahafinaritra sy manan-talenta ny vehivavy taloha ary tokony ho vehivavy 'Andriamanitra fa ankehitriny dia ampiasaina ho amin'ny fanjakan'ny maizina. Misy fotoana Manontany tena aho raha mahafantatra izany na tsia? Angamba ary angamba ao aminy izy dia mahalala tsara fa very izany izy… nefa mihevitra fa izy dia toy ny prisoner..there tsy mora ny lalana mivoaka ho azy… Jesosy ihany offcourse! Ndeha mivavaka ho fahagagana! Enga anie Andriamanitra anie hanisy soa azy!
Rachel • Janoary 30, 2014 amin'ny 6:27 aho • navalin'i
Miombon-kevitra aho Trip Lee, afa-tsy…. Fa ny be mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any noho Jay-Z… koa eo amin'ny lafiny tiany hahatongavana rehefa ho hariva aloky ny Tsitoha noho ny mafana helo ;)
ny herblessedseeds • Janoary 30, 2014 amin'ny 9:10 aho • navalin'i
Ankasitrahako ny faniriana manomboka fifanakalozan-kevitra izany amin'ny fitiavana amin'ny fanantenana ny hahazo ny fahamarinana ny sasany faharesen-dahatra sy ny avy amin'ny indray mandeha nanambara tena kristiana Beyoncé. Ity resaka foana no tokony handeha , amin'ny tenantsika , Ny Kristianina sy ny olona rehetra . tsy manana ny hanery ny fahamarinana , hamboleko azy fotsiny . Sylvia Fanali herblessedseeds, tao amin'ny Facebook sy Instagram
Vicki pizazzi • Janoary 30, 2014 amin'ny 9:14 aho • navalin'i
I tia Trip Lee.
PJ • Janoary 30, 2014 amin'ny 9:59 aho • navalin'i
Wow! Izany no awesome! Mahitsy ny teboka, nefa mbola fanajana. Fantatro fa maro amintsika no sahiran-tsaina ny amin'ny zava-nitranga tamin'ny Kristianina isika Beyoncé toa foana aoka manana mandalo noho ny “finoana”.
Taniqua • Janoary 30, 2014 amin'ny 11:53 aho • navalin'i
Ny fanontaniana nahatonga ahy hieritreritra momba ny fomba I mihevitra Beyonce. Mieritreritra aho fa ny tena manan-talenta izy. Manaja ny asa tanana. Manontany tena aho ny fomba mety hamaliana ireo fanontaniana ireo. Mety ho mahaliana. Lehibe hevitra momba ny tsara tarehy maharary hira. Izy dia milaza ny ankizivavy tsy hamono tena ho tonga lafatra, nefa izy mahafeno ny fari-tontolo tonga lafatra….. Hmmm mahatonga hieritreritra iray.
diggity • Janoary 30, 2014 amin'ny 12:11 PM • navalin'i
tiako ny questions.but fanontaniana 5 Rehefa jerena, dia hoatran'ny hoe mahazo lasa 40 cant mijery ianao mangatsiaka na ho mangatsiaka .I Don mihevitra thats antonony kevitra…mazava tsara
RichieBeadle • Janoary 30, 2014 amin'ny 12:49 PM • navalin'i
Great fanontaniana, Trip! Ary vao sendra mamaky izany araka izay ataon'ny sasany feon'ny diany-niakatra teo amin'ny headset ny filaharan-kira!
Ny fanontaniana maneho lalina, tena fiahiana sy ny fahatsapana, ary toa avy any amin'ny toerana izay mikarakara. Fa nahoana io Mega-superstar na dia mamaky ny fanontaniana aza, mainka fa mamaly azy ireo? tsara – avy ny fomba fijery – dia tokony, satria ianao tsy manontany azy na inona na inona tsy manontany ny tenanao!
Inona ny porofo? tsara, Aho mihaino azy izao…”Fotoana izao ho an'ny mandini-tena, mila mandini-tena, tonga ny fotoana ho an'ny mandini-tena, mila mandini-tena mety!”
Jereo izany Beyonce! Ianao koa, Jay-Z! (Izany dia midika hoe antsoina hoe Self Rehefa nandinika) :-)
Chinth • Janoary 30, 2014 amin'ny 5:28 PM • navalin'i
Hey diany, ny fanontaniana dia tsotra, nefa nihevitra mihantsy. Izany mampisambotra ny mpamaky ny fahatsapana ny tena fandinihana ary koa, ny fahatsapana ny andraikitra hiaina ny fiainantsika miendrika ny filazantsara izay efa noraisintsika sy hanaiky isan'andro, fa tsy avy any ny fireharehana, fa foana ny fanetren-tena sy ny fitiavana. fitiavana. fitiavana. fitiavana. ny fitiavana madio dia mahery kokoa noho ny fasana. dia tsy fantatro ny antony, na inona no mahatonga mamy Beyonce hanao ny zavatra ataony izy. fa isika dia nantsoina ho amin'ny fitiavana sy nampahatezitra ho tia, ka manompoa. ary mihevitra fametrahana fanontaniana izay mikasika ny zavatra ao am-po tsara ho an'ny fo. sady tsara ka nampahatezitra ;)
misaotra anao noho ny fitiavana
p.s Jay Z loatra mangatsiatsiaka ho an'ny olona an-tsekoly
Bethany • Janoary 30, 2014 amin'ny 6:02 PM • navalin'i
I gotta milaza,asa tsara mikasika ity lahatsoratra ity. Aho izany no fanaon'ny ny mandre azy ny olona bash,fa mihaino ianao fanontaniana tena manontany tena aho indraindray rehefa mieritreritra ny mahita azy. Raha ny marina aho fa tsy handeha hamaky ny lahatsoratra, satria fotsiny aho reraka ny olona mpiseho. tsara hevitra.
handeha • Janoary 30, 2014 amin'ny 8:06 PM • navalin'i
Ianao dia tsara fanahy doka fitiavana fo! Ny fitiavan 'Andriamanitra Tondraka ao amin'ity bilaogy. Mitso-drano anao hamandrika!
Asne • Janoary 30, 2014 amin'ny 10:00 PM • navalin'i
Tsy maintsy milaza ny fanontaniana rehetra dia lehibe ny ankoatra ny tranga miavaka ny isa 5( Hitako aiza ianao na avy, fa Jay-Z dia tsy mangatsiaka ary defintely mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any noho ny olona iray tsy velona ho an'ny Tompo.). Toa toy ny hoe ianao defintely mikarakara ny azo antoka momba ny vehivavy. Tsy te-hitsambikina ho misy tsoa-kevitra, toy ny ianao, dia tsy mba nizara ny Filazantsara niaraka taminy rehefa avy manolotra ireo 4 nihevitra fanontaniana mampisaintsaina aloha. Na izany aza, I no miombon-kevitra amin'ny mpiara-Commenter(JONREAGAN) ao amin'ny bilaogy ity. Ny Filazantsara no hany fo / saina-changer. Mety ho be raha nandre izany amin'ny olona iray(toa anao) izay ihany koa mandray anjara amin'ny mozika(Na dia samy ao amin'ny lalana samihafa) ary fantaro ny halalin 'izany hery miasa mangina. Misaotra Trip noho ny fahavononany hanompo ny Tompo, Izany dia midika hoe Mampahery ny olona toa ahy, izay no tena saro-kenatra, rehefa nanorina ny fifandraisana amin'ny olona sy ny fizarana ny filazantsara. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao!
Asne • Janoary 30, 2014 amin'ny 10:21 PM • navalin'i
miala tsiny, I adinonao ny hanampy ny fanontaniana izay te ho anareo ny manontany. Mety ho be raha afaka manontany azy: Inona no karazana mozika / tononkira no mino ny ray aman-dreny dia tokony hiaro ny zanany amin'ny?
MichelleJ • Janoary 31, 2014 amin'ny 12:57 aho • navalin'i
Izany no fomba tsara hahazoana ny resaka Rolling. Manokana aho mpankafy azy ny tenako, saingy sarotra ny mahita azy mafy amin'ny fiainana amim-peo avo, fampianarana sy ny fampiroboroboana ny toetra araka an'Andriamanitra raha mbola (mangingina) jamming azy lalan'ny. Izany dia midika hoe ny tolona efa ho iray minitra, indrindra satria aho mpiara-Houstonian SY ny alumna avy ny kilasy sekoly. Manodidina aho, Lazaiko ya!
Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana fam!
Asne • Febroary 1, 2014 amin'ny 12:03 aho • navalin'i
Hi MichelleJ, fa tena tsara sy salama ara-panahy hendry fa tsapanao convinction eo amin'ny fiainanao rehefa ny mifanohitra. Manentana anareo aho mba hivavaka feverently fa ny Tompo dia manaisotra izany faniriana hihaino ny hira izay mazava ho azy fa anti-Kristy amin'ny fomba maro, Eny ary Tsy te-sugarcoat izany, ny ankamaroan 'ny mozika Satana saingy tsara tarehy. Fantatro fa tsy nilaza aho anao na inona na inona izay tsy fantatrao ny momba ny hira efa maha anti-Kristy, fa mba hihaino ahy avy. koa, mahazo olona(ny mpiray finoana mazava ho azy) iza no afaka matoky ny mihazona anao tompon'andraikitra ary hazavao / manaiky ny tolona ho azy. Isika rehetra dia manana tolona mahatsiravina Ary ny Tompo anie hanome antsika ny fahasoavany mba handresy ny tolona.
P.S. Tsy mba hanamarinana anao mihaino ny hira saingy tsy hihevitra ny anao mba minia hitondra henatra ho an'ny Tompo sy miharihary mihaino azy eo anoloan'ny olona izay mitady anao ho toy ny ohatra nomen'i Kristy. Enga anie ny Tompo anie ho aminareo.
Saham • Febroary 1, 2014 amin'ny 3:41 PM • navalin'i
Tena toy izany koa aho manana fanontaniana. Maro ny namako niandrandra ny Beyoncé izay mampanahy ahy be dia be raha ny marina. Mampalahelo fa ny maha Sexy no miezaka mafy izy ireo fa noho ny azy hery miasa mangina. Izy ihany koa no natao tao amin'ny faladiany, dia toy izany avokoa ny olona sasany fa tahaka ny tena manan-talenta izy, izy dia afaka manao izay tsy ratsy… tsy mieritreritra ny zavatra manakiana ny hoe izy sy ny fanaovana sy ny fomba fiantraikany azy ireo… raha vao mandre Beyoncé fa tsara, na inona na inona ny hafatra, izay tena mampalahelo. Koa Eny, Tena faly aho fa Trip mangataka ireo fanontaniana ireo – izy ny olombelona tahaka ny sisa tokony handinika antsika sy ny zavatra ataony ary izy no fiantraikany toy ny Filohan'ny United States… izy no ao amin'ny haino aman-jery toy ny be, raha tsy izany more.
Natalie • Febroary 1, 2014 amin'ny 5:06 PM • navalin'i
Hey haka fantatrao #5 izany no zavatra tsara tao haaa!!!
tsara Aho no hoe efa nahazo lazaina intsony ny Illuminati toy ny mitondra ny tena ratsy gazety, fa any no tsy maintsy hijery afa-tsy ny fijoroana ho vavolombelona dmx amin'i Kristy sy ny zavatra nataony ny Illuminati taminy ny mahafantatra izany.
I aint nanao hoe: J-Z definately manana anjara fa Rihanna ka azy tsy mifraody, fa tsy ho tafiditra ny kely rehetra ny kisendrasendra..
tiako Beyonce azy izay nomena talenta.. ny ny vokatry ny fanahy..
ary araka izay tiako mamo amin'ny fitiavana ( toy ny hira manokana avy aminy ho an'izay TOKONY misy tompony manokana fotsiny izy, fa tsy ho antsika mba JEREO ) aho no mahatsapa izy dia teo ambanin'ny faneren'ny, Tena no mieritreritra ny zavatra rehetra no dented Rihanna ny finoany, ny tena finoana, sy ny tena fitiavana fa isika rehetra dia tsy maintsy manana ny sasany..
dia mila ny vavaka!! misaotra anao noho ny tsy te-hanafika azy amin'ny fanontaniana, Misaotra ny Fanahy Masina ho nanasa anao ny fahendrena fa tsy ny didim-pitsarana.. voalaza ao amin'ny Baiboly isika, dia tsy hitsara.. nefa ny ankamaroan'ny Kristianina izany ho toy ny tehina. ny fianakaviany dia toy izany.. ao anatin'izany ny ahy.. ary ianao no ohatra amin'ny KRISTY! Andriamanitra anie hitahy anao sy ny mozika, ny asa fanompoana amin'ny alalan'ny mozika sy Andriamanitra hitahy Beyonce ho izy, dia hiverina ny herin'ny vavaka dia mahery kokoa noho ny demonia nihatsaravelatsihy hanafina ny fahotana!
Jacob • Febroary 1, 2014 amin'ny 10:10 PM • navalin'i
Mahaliana fa mangatsiatsiaka!
Chioma • Febroary 3, 2014 amin'ny 7:05 aho • navalin'i
Dia tsara ny Yu tsy hitsara azy, na Fipoahana ny N #5 I knw yu're fomba mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any noho Jay-Z….
Demarcus • Febroary 5, 2014 amin'ny 7:47 aho • navalin'i
Tiako ary tsy azoko antoka ny momba ity? Nefa tsy nihira, dia ny anareo ao amin'ny Fiangonana, na nanana anjara toerana lehibe ao am-piangonana? Mino aho fa tokony hanao izany. Aho mivavaka ho anareo.
Kay • Febroary 5, 2014 amin'ny 8:31 aho • navalin'i
Misaotra anao fametrahana fanontaniana izay maro amintsika ho tia ny manontany. Koa satria manana ny sehatra hanao izany, isika rehetra mankasitraka anao. tsara Andriamanitra, ary satria naka fotoana be atao avy amin'ny fandaharam-potoana mba manontany ireo karazana fanontaniana amin'ny fomba tena matihanina, Hamaly soa anao Izy ampahibemaso. Rehefa voalaza, dia mety ho mpanota, tahaka isika rehetra dia, fa raha nanaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy, ianao, tompoko, ankehitriny mpanota Voavonjy amin'ny Grace. Amen!
Aric • Febroary 6, 2014 amin'ny 9:30 aho • navalin'i
Mino aho fa izy dia lasa tena vokany ratsy tato ho ato, na iza na iza mandeha mitanjaka an-tsehatra antsasaky ny tokony handinika indray ny zavatra ataony amin'izany ny toe-javatra. Tena tezitra aho miaraka amin'ny Voalohany Lady noho ny tsy fanohanana bebe kokoa approiate mpihira. Obama dia tsy miova amin'ny fanohanana seculier Rap mpanakanto izay mampirisika ny herisetra rehefa tokony ho amin'izany!
mandeha • Febroary 7, 2014 amin'ny 1:15 aho • navalin'i
Tena greatful Aho noho ny fomba voarafitra ny fanontaniana( amin'ny fomba mitsaratsara Tsy misy) izay awesome. ankehitriny, isika dia nohariana mba ho ny fanaky ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fananana fiainana ao anatin'ny fanompoam-pivavahana (vavaka, mamaky sy misaintsaina ny tenin'Andriamanitra, mitory sy mampianatra ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny sitrapony ho azy ireo. Koa mamela hivavaka ho an'ireo manodidina antsika, mba hahitany ny alalan 'ny maso' Andriamanitra sy tsy manaraka ny fomba ny izao tontolo izao tahaka ny mijoro ho vavolombelona momba ny asan'Andriamanitra.
Faharetana • Febroary 12, 2014 amin'ny 12:13 PM • navalin'i
Betsaka ny ankizy ao am-pianarana ny haka amiko ary fantatro fa afaka manova Beyonce fa izany tiako izy raha manao ho akaiky sakaizako, ary tonga ny sekoly mba hilaza ny olona fa amiko sy ny ny namany
Jess • Febroary 12, 2014 amin'ny 2:03 PM • navalin'i
Na i Jesosy aza Nipetraka tamin'ny mpanota.
Isika dia nantsoina handeha amin'ny fitiavana ary hanampy ny amin'i Kristy.
Charity • Febroary 13, 2014 amin'ny 12:23 PM • navalin'i
ireo efatra (fanontaniana 5 tsy niampita ny saiko mihitsy, Mino aho fa ianao mangatsiaka kokoa) fanontaniana mamintina rehetra 100 ny anankiray aho ho Beyonce.
mitondra • March 2, 2014 amin'ny 2:57 aho • navalin'i
Thinkin fotsiny bout U nanao hoe: yall dia samy mpanota mitady Andriamanitra fahasoavana. Antoka izy dia miasa toy ny manana izy, ary tanteraka. Izy nahazo mpijery maro loatra ny N mora fanahy hiala. Ity dia foana bebe kokoa eto amin'ity fiainana ity no mahatonga izao ny an-danitra. Ny Devoly no eto, ary mino izany na tsia thats ny fomba miasa. Tsy adala izy mahatonga fotsiny izy satin, fa tsy ny any an-danitra na oviana na oviana ny Ray, ary afaka manome U bebe kokoa na tia U mihoatra noho Andriamanitra Mahery Indrindra. Misaotra
te • March 11, 2014 amin'ny 4:01 PM • navalin'i
Tiako ity lahatsoratra ity! Ireo no fanontaniana lehibe sasany. Artists matetika manadino momba ny hery miasa mangina ananany eo amin'ny tanora, na ny olona amin'ny ankapobeny, ary no tsy tonga saina ny habetsaky ny tsindry sy ny fikorontanana izay azo atao nahatonga.
Masìna ianao, mbola hamela an'Andriamanitra hampiasa anao sy hamita ny asa efa natomboka ao anatinareo. Luv.
P.S. Misaotra namaly ny fanontaniana mikasika ny antony ankizivavy nanambady fotsy…tpt!
Tiffanie • Aprily 3, 2014 amin'ny 9:55 aho • navalin'i
Awesome lahatsoratra. Misaotra noho ny fankatoavana sy mizara. Hitahy anao sy ny fianakavianao.
Ashley D. • Jolay 14, 2014 amin'ny 10:29 PM • navalin'i
Julia nifindra • Oktobra 14, 2014 amin'ny 10:08 aho • navalin'i
Waaaaaaayyyyyy mangatsiaka kokoa noho ny JayZ. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
miresaka momba: I Jesoa Kristy Fanjakana | Ny mpitandrina-mpiangaly rap Trip Lee Talks Calling Tanora mba 'Mitsangàna’ ary ny fanompoana ny Fans ny olona tsirairay (Video)
miresaka momba: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' ary ny fanompoana ny Fans ny olona tsirairay (Video) - Social News Dashboard
Live Sex Show • Jolay 29, 2019 amin'ny 2:18 PM • navalin'i